ဓမ္မ နှင့် အဓမ္မ ဆိုင်ရာ စာပေ ဟောပြောပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » ဓမ္မ နှင့် အဓမ္မ ဆိုင်ရာ စာပေ ဟောပြောပွဲ
ဓမ္မ နှင့် အဓမ္မ ဆိုင်ရာ စာပေ ဟောပြောပွဲ
Posted by mayday on Oct 31, 2011 in Science & Religion | 22 comments
အောင်ပန်းမြို့မှာ 29.10.2011 စနေနေ့ နှင့် 30.10.2011 တနနေ့ မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဓမ္မစာပေ ဟောပြောပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ ဓမ္မစာပေ ဟောပြောပွဲ ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဓမ္မစက္ကဖောင်ဒေးရှင်း(IDF) နှင့် အောင်ပန်းမြို့မှ ထေရ၀ါဒ လူငယ်များအဖွဲ့တို့ ပူပေါင်းစီစဉ်ပြီး ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာကို ပထမဆုံးကျင်းပသော ဓမ္မစာပေ ဟောပြောပွဲ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ထိုဟောပွဲတွင် ဓမ္မ နှင့် အဓမ္မ ၀ါဒဆိုင်ရာများကို အဓိက ဆွေးနွေးတင်ပြသွား ပါသည် ။
(၁).ဆရာကြီး ဦးညွန့်မောင် (ဓမ္မာစရိယ၊ဘီအေ၊အာရ်အယ်လ်) ညွန်းမှူး/ငြိမ်း (သာသနာရေးဦးစီးဌာန)
(၂).ဆရာ ဓမ္မစက္က ဦးမောင်မောင် ။
(၃).ဆရာ ဦးဝင်းအောင်ကြည် ။
(၄). လပြည့်ဇင် ( လက်ယာ) မေတ္တာတံခွန်
တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ ၂ ရက်လုံး စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာနှင့် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
CD ခွေထွက်လာလျှင် ဂေဇက် ၀ိုင်းတော်သားများ ဘာသာရေးဆိုရာ ဗဟုတုသ များ တိုးပွားနိုင်စေရန် Upload လုပ်ပီး ဂေဇက် ဆိုက် မှာ Link တင်ပေးမဲ့ အကြောင်း ကြိုင်တင် အသိပေးအပ်ပါတယ် ခမျာ ။
View all posts by mayday →
ဟုပ်ကဲ့ပါဗျာ။ ပို့စ်တင်နိုင်အောင်းလည်း ကြိုးစာပါမယ် ။ ၀ိုင်းတော်သားများ အားလုံးလဲ ၀ိုင်းဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ် ။
ဘာသာရေးဆိုရာ ဗဟုတုသများ တိုးပွားဖို့ထက် ဘာသာရေးဆူပွတ်ဖို့ပဲများတဲ့ လူဆူတွေရဲ့ပွဲပဲ။
တစ်ဖတ်သတ်နဲ့ အနိုင်ကျင့်တာ တရားလား၊ မတရားလား၊ စဉ်းစား၊ ဒါ အစွန်းရောက်ဘာသာရေးသမားတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ၊ သေသေချာချာစုံစမ်းကြည့်။ သမိုင်းရဲ့ ဒဏ်ခတ်တာကို ခံရမည်မှာမလွဲ၊
လူတွေကို ဆူပူအောင်၊ လှုံ့ဆော်မှုနဲ့တော့ ဘယ်တော့ မှ ငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်၊ ဒီလူဆူတွေကို သိပ်မြောက်ပေးမနေကြနဲ့၊ ကြာရင် ထေရ၀ါဒရော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ နံမည် ပျက်တော့မယ်။ အစိုးရကလည်း ဒီလူဆူတွေကို အကဲခတ်နေပြီ၊ သိလား၊ အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားနေတယ်၊ ဒီလူဆူတွေက ဆူပွတ်မယ့် မငြိမ်းချမ်းရေးကို သွားနေတာ ဓမ္မလား၊ အဓမ္မလား၊ စဉ်းစားကြ။
ရိုးရိုးးသိမ်းပိုက်တာထက် ကိုယ်နဲ့အယူအဆမတူရင် ရန်သူလို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြတာ ကြားရတာ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်ကတော့ ရင်လေးစရာပါ။ တစ်ပါးသူတို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို အတင်းအကျပ်ဖိနှိပ်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ အဓမ္မဖြေရှင်းတဲ့နည်းကိုက အဓမ္မဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ကြာရင် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုပါ ထိခိုက်တော့မယ်။ ညှိနှိုင်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းလမ်းများဖြင့် ၀ိုင်းစဉ်းစားကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကို မည်သူမှ အပိုင်မသိမ်းပိုက်ထားသင့်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
ဟုတ်တယ်…ဟုတ်တယ်။ တရားရှာရာမှာတောင် ကိုယ်တွေ့သလို မတွေ့ရင် ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ မတူခဲ့ရင် ကိုယ်သာမှန်ပြီး ကိုယ်နဲ့မတူသူအမှားပဲလို့ ယူထားတဲ့အယူလေးတွေဟာ သိပ်ကိုနုသေးတာပဲလို့ တွေးမိပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးရဲ့ ပါရမီဖြည့်ကျင့်လာပုံနဲ့ စရိုက်ကစ မတူနိုင်တာမို့ ကိုယ်နဲ့တူမှအမှန်လို့ ယူထားတာကတော့ တော်တော်လေးဆိုးလှပါတယ်။
ဖိတ်ကြားတဲ့ အီးမေးတော့ ရတယ် ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ သွားနားထောင်ချင်တောင် ပေါက်မိတယ်။
အသံဖိုင် လင့်တင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုဆိုပါတယ်။
အသံဖိုင်ထက် စာစီထားတာ ရှိရင် ပိုကောင်းမလားလို့ အေးအေး ဆေးဆေး ဖတ်ချင်လို့။
မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက် နာမည်အလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့ ဣန္ဒာစရိယာဘိဝံသ မွှန်ထူပြီးလျှောက်လုပ်နေတဲ့နောက်
(၄). လပြည့်ဇင် ( လက်ယာ) မေတ္တာတံခွန် တို့ လျှောက်လုပ်နေရင်တော့
တကယ့်ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ ဆရာကြီးတွေက ဘယ့်နှယ့် သူများအသရေလျှောက်ဖျက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်လို့ အံ့သြမိပ။
ဆရာကြီးတို့ သေသေချာချာစဉ်းစားကြပါ၊ အတင်းအကြပ် အသရေဖျက်၊ အပုတ်ချ၊ နှိပ်ကွက်တဲ့ လမ်းစဉ်ဟာ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ဖြစ်ရဲ့လား။
ကြာရင်ဆရာကြီးတို့ ရထားတဲ့ စာပေသြဇာတွေ ဒီဘုန်းကြီးရမ်းကားနောက်လိုက်မိလို့ ကျဆုံသွားရင် နှမြောစရာပါပဲ။
mayday စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ မြန်မြန်လေးတင်ပေးပါ။ အခုချိန်မှာ ဒါတွေဟာ လိုအပ်နေပါတယ်။
ဓမ္မလား အဓမ္မလားတော့ မသိဘူး …။ တွေ့နေရတာအတော်များများကတော့ အလှူဒါန ပဓာန မဟာထေရ၀ါဒ ချည့်တွေ့နေရတာပါပဲ…။ စိတ်ညစ်ဖွယ်ကောင်းလေစွ တစ်ကား……………….။
အနော် က တော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဝေးတယ်
အသံဖိုင် ကို မေဒေး တင်ပေးလာမှ ဘဲ နားထောင်တော့မယ်
ဟုပ်ကဲ့ပါဗျာ ။ ရ ရချင်း တင်ပေး ပါ့မယ်ဗျ ။ ပီးမှ အမြင်လေးတွေ ဖလှယ်ကြတာပေါ့ ။ တစ်ဘက်တတ် ကြီးလဲ မဖြစ်ရလေအောင် ၀ိုင်းဝန်းဆွေနွေးကြ တာပေါ့ ။
ဒီလူတွေကမကောင်းဘူး..။ ဒီလူတွေပြောတာ မမှန်ဘူး..။
ငါတို့မှန်တယ်..။ ငါတို့ပဲ မှန်တယ်..။
ငါတို့က..အစစ်..။ မစစ်သူတွေကို ဖမ်းထောင်ချရမယ်..။ နှိပ်ကွပ်ရမယ်..။
အဲဒါကြောင့်.. ကောင်းတာမွန်တာပြောတဲ့..ညွှန်ပြတဲ့.. ငါတို့ကို.. လှူ..။
ငါတို့ကို မလှူရင်.. ဘာဖြစ်မယ်..ညာဖြစ်မယ်..။
လှူရင်.. ဒါတွေကောင်းမယ်..။ ဒါတွေ..ရမယ်. ။
ဓမ္မ နှင့် အဓမ္မဆိုတော့ အခု ဒီပွဲဦးစီးကျင်းပတဲ့သူတွေက ဓမ္မ၀ါဒီတွေဖြစ်ပြီး ထိုသူတွေ၏ဝေဖန်မှုခံရသူက အဓမ္မ၀ါဒီလို့ ဆိုလိုတာလား။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အများသဘောနဲ့ မကိုက်ညီဘူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အများကို ငါနဲ့မတူသူ ငါ့ရန်သူလို့ ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်လိမ့်မတုန်း။ ဓမ္မဆိုတာ မြန်မာလို တရားဘဲ၊ တရားဆိုတာ ဆောင်အပ်သောအရာဘဲ၊ ယခုပွဲဦးစီးကျင်းပတဲ့သူတွေက မည်ကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများကို ဆောင်ပြီးကျင့်သုံးနေကြတာလဲ သိချင်ပါတယ်။ ငါတို့က ဒီလိုပြောတာ ၊ သူတို့က ငါတို့ပြောတာနဲ့ မတူဘူး။ ဒါဆို သူတို့က အဓမ္မလို့ပြောရင်တော့ ကလေးဆန်လွန်းပါတယ်။
ဘုရားသက်ရှိစဉ်အချိန်မှာတောင် ခေတ်ပြိုင် ဘုရားကြီး(၆)ဆူရှိတယ်လို့ ဆရာတော်တစ်ပါးဟောတာကြားဘူးပါတယ်။ ဒီအယူအဆမတူတဲ့ အခြားသော ဘုရားများရဲ့ တပည့်များ နေထိုင်ရာဆီသို့ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘုရားသွားရောက်တရားဟောပြောခဲ့တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျောက်ဖျာနက်စခန်းလို့ခေါ်တဲ့ နိဂန္တနာရပုတ္တတပည့်များဆီကို သွားရောက် ခဲ့ပြီး တရားဟောတာပါ။
ဒီနေ့ ဓမ္မဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလည်း အခြားသော မိမိနှင့်မတူသူများကို အဓမ္မလို့ ကုန်းအော်နေမည့်အစား သနားသောစိတ်ထားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားသားတပည့်များပီသလျှင် ဒေသစာရီကြွရောက် ဆုံးမတော်မူကြပါ။
္ဒဓမ္မ၀ါဒီများခင်ဗျာ။ အမှန်တကယ်ပင် ဓမ္မ(တရား)၀ါဒီဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွင်ပင် ဓမ္မ၀ါဒီလုပ်မရပါ။ အချိန်နေရာဒေသမရွေး ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှနေပြီး မည်သည့် ဘာသာဝင်ကိုမဆို ပြောဆိုလမ်းညွှန်နိုင်ရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွင် အင်အားအသာစီးဖြင့် အခြားဘာသာများကို အဓမ္မဟု ကုန်းမအော်သင့်ပါ။ သင်တို့ကိုတော့ အခြားဘာသာဝင်များက မည်သို့မျှ ပြုမူလိမ့်မည်မဟုတ်။ ဒီလိုမတုန့်ပြန်ခြင်းသည် အဓမ္မဟု ၀န်ခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ပါက လွန်စွာလွဲပါလိမ့်မည်။ အခြားဘာသာဝင်များ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူသားအချင်းချင်း လွပ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုကို အစဉ်လေးစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကဲ့သို့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားနေသော ခေတ်ကာလတွင် သင်တို့အနေဖြင့် သင်တို့သာ ဓမ္မ၀ါဒီ၊ သင်တို့နှင့်မတူသော အခြားဘာသာဝင်များကို အဓမ္မဟု ပြောဆိုနေခြင်းသည် သင်တို့အဆင့်သင်တို့ ဆုံးဖြတ်ပြနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကို များစွာသိရှိဖို့လိုပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး လွပ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် ရရှိပြီး လူသားအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားစွာဖြင့် ငြိမ်းချမ်းမှု တည်ဆောက်နိုင်စေရန် ဆန္ဒပြုလျက်။
ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ ကိုမေဒေး။ အဲ့ဒီ အဓမ္မအဖြစ်ရှုတ်ချသူနဲ့ အဓမ္မအရှုတ်ချခံရသူတို့ကို မျက်နှာခြင်းဆိုင်လို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ကြားထိုင်ပြီး ပြည်သူအားလုံးကြားအောင် ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုခုကနေပြီး အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြမယ်ဆိုရင် တရားနည်းလမ်းကျ ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဟို…ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံလိုပေါ့။ ဒါမှ ကျုပ်တို့တွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီကျကျ မဲပေးနိုင်မှာပေါ့။ အခုဟာက ဘာမှရေရေရာရာမသိရဘူး။ လိုချင်တာတွေကို စွဲတင်ပြီး
အတင်းအဓမ္မဖြစ်အောင်များလုပ်သလားလို့တောင်ယူဆမိတယ်။ (ဖြစ်နိုင်ရင် ပြောပေးနော်။) ဒါမှ ဘာသာဝင်တွေအားလုံး သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပေါ့။ အခုဟာက မစိုးရိမ်စာသင်သားရဲ့အပြောတွေကိုပြန်ကြည့် ရင် သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားကျနေတာပဲ။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ သူ့ခောတ်ပြိုင်က အယူအဆမတူသူတွေကို အဓမ္မလို့
မပြောခဲ့ပါဘူးဗျာ။ သူမြင်ခဲ့တဲ့ အယူအဆကိုသာချပြတာပဲ မဟုတ်လား။ ဦးသုမင်္ဂလရဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ပူဇော်တဲ့ပွဲမှာ ဦးဥာဏိဿရ(သီတဂူ)ဆရာတော်ပြောသွားတဲ့ မိန့်ဆိုချက်နဲ့လည်း လားလားကြီးဆန့်ကျင်လိုက်တာ။ မတူတာတွေကို ငြင်းမနေနဲ့တဲ့။ တူတာတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး သွားကြတဲ့။ ကဲ….။ ကြည့်ရတာတော့အယူအဆမတူသူတိုင်းကို အဓမ္မ၊ အဓမ္မနဲ့ ပြောနေကြတာအတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထီမထင်ရာရောက်နေပါပေါ့လား။ အင်း…အဓမ္မဒုက္ခကြီးပါလားဗျို့။
ဟန်ဆောင်ခြင်းကို အဓမ္မဟုဆိုလိုကြောင်းသေချာစွာရေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါသည်။ တပ်မတော်သား မဟုတ်ပဲ တပ်မတော်သား အ၀တ်များဝတ်ဆင်၍ တပ်မတော်သား ဟန်ဆောင်သောသူသည် မှန်ကန်သောတပ်မတော်သား အတွက် အဓမ္မဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူပင် မိုးပြာဂိုဏ်းဆိုသည်မှာလည်း ထေရ၀ါဒ၏ စကားလုံးအခွံများ (အနှစ်သာရအဓိပ္ပါယ်များကိုယူထားခြင်းမဟုတ်၍) ၀တ်ရုံထားခြင်းကို ဖယ်ခွါလိုက်ပါက ဘ၀နေထိုင်နည်းတစ်ခု၊ အတွေးအခေါ်ဂိုဏ်းတစ်ခုသာ ဖြစ်ကြောင်းသေချာသိသင့်ကြပါသည်။ ထိုအတွေးအခေါ်များကို ယုံကြည်ခြင်း၊ လက်ခံနေထိုင်ခြင်းသည် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်ဖြစ်သော်လည်း ထေရ၀ါဒ၏စကားလုံးဝတ်ရုံများကိုတော့ ဖယ်ခွါထားသင့်တယ်လို့ယူဆပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးပြာဂိုဏ်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် အတွေးအခေါ်များပွင့်လင်းလာခြင်းဖြစ်၍ ကြိုဆိုသင့်သည်မှန်သော်လည်း အခြေခိုင်နေသော ထေရ၀ါဒအတွေးခေါ်၏ လွမ်းမိုးခံရခြင်းကြောင့် ထေရ၀ါဒစကားလုံးဝတ်ရုံများ ၀တ်ခြုံမိ၍ အဓမ္မဟူ၍စွပ်စွဲခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုမြင်မိသည်။ ထို့ကြောင့် ပွင့်လင်းစအတွေးအခေါ်များ အဓမ္မဟုစွပ်စွဲမခံရရန် နည်းလမ်းရှာရန်လိုအပ်ပြီး ဘာသာရေးစကားလုံးအခွံများ သုံးစွဲခြင်း (စကားလုံးများ၏ နားလည်ပြီးအသားကျနေသော အဓိပ္ပါယ်များကို အခြားအဓိပ္ပါယ်များနှင့်သုံးစွဲခြင်း) များကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်လည်း အတွေးအခေါ်များလွတ်လပ်စွာ ရှေ့ဆက်နိုင်ရန် အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်မိမိတို့ အတွေးအခေါ်များကိုလည်း ခိုင်မာပြည့်စုံသော၊ ကျမ်းအင်္ဂါံနှင့်ညီညွှတ်သော စာပေများးပြုစုသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတပါးအယူအဆများကို ဝေဖန်ခြင်းသည် မိမိအယူအဆကိုတင်ပြခြင်း အပြည့်အစုံမဟုတ်ကြောင်း သတိထားသင့်တယ်လို့ယူဆပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိအယူအဆကို ပြည့်စုံစွာတင်ပြခြင်းသည်လည်း အတွေးအခေါ်အသစ်များ ရပ်တည်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးစာများ၊ ဘာသာရေးစာများကိုဖတ်ရာတွင် သတိထားသင့်သည်ထင်သော အချက်တချို့ကိုဖေါ်ပြချင်ပါတယ်။
အဖြောင့်စဉ်းစားလိုသူတို့သည် တတ်နိုင်သမျှ စိတ်လှုပ်ရှားမှု အဓိပ္ပါယ်ပါသော စကားလုံးတို့ကို ရှောင်ရှားကာ ဖြစ်ရပ်မှန် စကားများကိုအစားထိုး၍ သုံးစွဲသင့်တယ်လို့ဆိုပါသည်။ အဖြောင့်စဉ်းစားနည်းတွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှု အဓိပ္ပါယ် ပါဝင်သည့် စကားလုံးတို့ နည်းနိုင်သမျှ နည်းသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းက သုံးစွဲခဲ့သော ဗြိတိသျှ ဒီဝီဇံ တပ်မကြီးသည်ရခိုင်ရိုးမ ကို ကျော်ဖြတ်၍ အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွါခဲ့သည် ဟူသောစာပိုဒ်တွင် ဆုတ်ခွါသည့် ဖြစ်ရပ်မှန် ကိုပင် အောင်မြင်စွာ ဟူသော ၀ိသေသနတပ်၍စာဖတ်သူတို့၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို နှိုးဆွခဲ့ပေသည်။ ထို့အတူပင် လုပ်ကြံသည် ဟူသော စကားလုံးနှင့် အဆုံးစီရင်လိုက်သည် ဟူသော စကားလုံးတို့၏ ဖြစ်ရပ်မှန် စကားလုံးမှာ သတ်သည် ဟူ၍ ဖြစ်ပေသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်စကားလုံးများကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုစကားလုံးများနေရာတွင် အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ရေးထားသောစာ၏ဆိုလိုချက်ကို မှန်ကန်စွာသိနိုင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဖြောင့်စဉ်းစားနိုင်ရေးအတွက် အားလုံး နှင့် အချို့ ဟူသော စကားလုံး တွဲသုံးမှုသည် အထူးသတိပြုရမည့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဘတ်သောင်းလက်စ် က အရက်သေစာပိတ်ပင်ခြင်း နှင့် ပါတ်သက်၍ သူ၏ အတွေ့အကြုံတစ်ရပ်ကို တင်ပြခဲ့သည်။ အရက်သေစာမပိတ်ပင်ရေး အဖွဲ့(ကန့်ကွက်သူအဖွဲ့) ကအောက်ပါအတိုင်း ပိုစတာရေးဆွဲကြသည်။
လွတ်လပ်မှု ဆုံးရှုံးရခြင်းသည် ကျွန်ဖြစ်ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကန့်ကွက်သူအဖွဲ့ကို မဲထည့်ကြပါ။
ဖေါ်ပြပါ ဆောင်ပုဒ်ကို ယေဘုယျသုံးသပ်ပါမူ မှန်သယောင် ထင်ရပေသည်။ သို့သော် တကယ်တမ်း အသေးစိတ် စီစစ်ကြည့်သည့် အခါတွင်မူ မိမိလိုရာ ဆွဲတွေးထားကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ ယခု အသေးစိတ်စိစစ်ကြည့်ကြစို့။
(၁) လွတ်လပ်မှု ဆုံးရှုံးရခြင်း အခြေအနေသည် ကျွန်ဖြစ်ရခြင်းအခြေအနေ နှင့်
(၂) အရာရာကို တားမြစ်ပိတ်ပင် ခံရခြင်းသည် လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း အခြေ
(၃) ထို့ကြောင့် အရာရာကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံရခြင်းသည် ကျွန်ဖြစ်ရခြင်း
အထက်ပါအတိုင်း စီစစ်ကြည့်သော် ပေးထားသော အချက်အလက်များသည် ခိုင်လုံသော အတွေးတစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း ထင်ရှား၏။ သို့သော် ကန့်ကွက်သူအဖွဲ့၏ တင်ပြချက်မှာ အရက်သေစာ ပိတ်ပင်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ အရာရာကို ပိတ်ပင်ခြင်းတွင် အရက်သေစာ ပိတ်ပင်ခြင်း သည်အကျုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အရက်သေစာ တစ်ခု တည်းကိုသာ ပိတ်ပင်တားမြစ်ကြောင်း ကိုမူ မျက်ခြည် မပြတ်သင့်ပေ။ ဤတွင် အားလုံး နှင့် အချို့ ဟူသော အသုံးအနှုန်းတို့၏ အရေးပါပုံကိုမြင်နိုင်ပေသည်။ အရာရာကို ပိတ်ပင်ခြင်းသည် အားလုံးကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ဆိုင်နိုင်၏။ သို့သော် အရက်သေစာ ပိတ်ပင်ခြင်းကား အချို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပေသည်။ အရက်သေစာ ပိတ်ပင်ရုံမျှဖြင့် လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးသည် ဟူ၍ ကောက်ချက်ချရန် မသင့်တော်ပေ။ ထို့နည်းတူ အရက်သေစာပိတ်ပင်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ဖြစ်သွားပြီဟူ၍ မဆိုသင့် ၊ မဆိုနိုင် တော့ပေ။ ဤတွင် ကန့်ကွက်သူအဖွဲ့ဝင်တို့၏ အကောက်စဉ်းစားမှုသည် ပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ ဒေါက်တာကျော်စိန်၏ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် မိမိတို့၏လက်ခံထားခြင်းများ၊ ကန့်ကွက်ထားခြင်းများကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး မှန်ကန်သောလွတ်လပ်စွာယုံကြည်မှုဆီသို့ ရောက်ရှိနိုင်၊ တည်ဆောက်နိုင်ကြရန်ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘယ်သူတွေက ဓမ္မဘက်ကလဲ… ဘယ်သူတွေကကော အဓမ္မဘက်ကလဲ ဆိုတာကိုပေါ့..
သေချာတာကတော့ ကျုပ်ကတော့ ဓမ္မဘက်ကနော်….
ဓမ္မသမားဆိုရင်တော့ လူတိုင်းအပေါ်မေတ္တာထားမှာအမှန်ပဲ…. ဟိုလူ့ကို ဒီလူ့ကို လက်ညိုးတွေထိုးပြီး ပြစ်တင်နေမှာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဗျို့…
အမှန်တရားသည် အရာရာကို အောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်..